बारामा अनौठो मोटर साईकल दुर्घटना – Mero Pradesh TV
Mero Pradesh TV Desk२०७६ फाल्गुन २३ गते
बिहीबार साँझ बारा जिल्लामा हेर्दा अनौठो लाग्ने किसिमको दुर्घटना भएको छ । ना. १२ प ९१२ नम्बरको मोटरसाईकल अनौठो किसिमले दुर्घटना भएको हो ।
दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक हेटौंडा उपमहानगरपालिका ७ का २८ वर्षीय मिठाराम दुराल घाइते भएका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत बाराको सिमरा उपमहानगरपालिका १६ स्थित पसाहा पुलको किनारमा दुराल उत्तानो परेर लडे । उनको ढाड सडकभन्दा करिब एक फिट अग्लो पुलको बारमा प¥यो । कम्मर मुनिको भाग सडकतिर र कम्मर माथिको भाग पुलको किनारातिर प¥यो । उनले चलाएको मोटरसाइकल भने उनको पेटमाथि चढेको थियो ।
उनको नाकबाट रगत बगिरहेको थियो । मोटरसाइकलको मोबिल शरीरमा चुहिरहेकोे थियो । दुर्घटनाका प्रत्यक्षदर्शीहरुले उनलाई तत्काल उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएका थिए ।
दुरालको गण्डक प्रसौनीस्थित बयोधा अस्पतालमा उपचार भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढले जनाएको छ ।
यस्तो दुर्घटना देखेर प्रहरी पनि अचम्ममा परेको छ । दुर्घटना कसरी भयो भन्ने थाहा पाउन अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रहरी निरीक्षक विकास थपलियाले बताए । दुराल कसरी पुलको बारमा उत्तानो परेर पल्टिए र अग्लो बारमा मोटरसाइकल उक्लिएर उनकै पेटमा कसरी पुग्यो भन्ने विषय तत्काल पत्तालगाउन सकिएको छैन,’
दुराल दुर्घटनामा परेको ठाउँदेखि केही मिटर पश्चिमतिर बा. १३ च १९७६ नम्बरको जीप दुर्घटना भएको फेला प¥यो । जीपको अगाडिको भाग क्षतिग्रस्त भएकाले सोही जीपले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ ।
प्रहरी निरीक्षक थपलियाले जीप र त्यसका चालक कलैया उप–महानगरपालिका ४ का उपेन्द्र साह समेतलाई नियन्त्रणमा लिई आवश्यक अनुसन्धान भैरहेको बताए ।